Psp go ရောင်းရန်ရှိသည် - MYSTERY ZILLION
မူလ › Sale › Accessories ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း မင်္ဂလာပါ!
Psp go ရောင်းရန်ရှိသည်
Orbs.7 November 2009 edited November 2009 in Accessories PSP GO နှစ်လုံးရောင်းရန်ရှိသည် အသစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် US မှဝယ်လာကြောင်း အာမခံသည်Screen cover လုပ်ပြီး၊ software version update လုပ်ပြီး၊ wma activation လုပ်ပြီး၊ ဂိမ်း၊themes များသွင်းပြီး(မလိုအပ်ပါက ကိုယ်တိုင်ပြန်ဖျက်နိူင်သည်:D)(PS:သုံးလုံးဝယ်လာတာ ပိုနေသည့်အပြင် ဘန်းကျော် connection နဲ့အဆင်မပြေပါသဖြင့်) 3????? ကျပ်ဖြင့်ရောင်းရန်ရှိသည်(2009 ခုနှစ် အတွင်းသာ)အလိုရှိပါက PM ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါရန်.......................... Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla